Madaxweynaha Dowladda Puntland oo ku laabtay Garoowe kana hadlay Arrimo dhowr ah | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo ku laabtay Garoowe kana hadlay Arrimo dhowr ah
GAROOWE – Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Garoowe kaddib muddo laba todobaad ah oo ay Muqdisho kaga qeybgalay shirkii Wadatashiga ee DFS iyo dowlaha xubnaha ka ah.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas oo maanta dib ugu soo laabtay Caasimadda Garoowe ayaa ka hadlay jahwareerkii ka dhacay dekeda Bosaso oo muddo sideed maalmood ah xirnayd, Waxaana uu sheegay in dadka ka soo horjeeda mashruuca dekeda ay yihiin kuwo dan gaar ah leh, oo ka soo horjeeda horumarka iyo ballaarinta Dekeda Bosaso.
Wuxuu sheegay in dowladu diyaar u tahay inay la fariisato oo dhagaysato cabashooyinka cidkasta, gaar ahaan ganacsatada, balse mashruucu sidii loogu talagalay uu u soconayo.
haday rabaan in wuxuu (Dekeda) siday ahaan jireen ahaadaan, Ma soconayso , waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye mustaqbalka iyo jiilasha soo socda iyo horumarkoodii weeye, marka shakhsiqaad dano gaar ah leh inay hor istaagaanoo oo dhib abuuraan la aqbali maayo” ayuu yiri Madaxweyne Gaas
in badan oo danleey ah oo xumaan u dan leh oo aan horumar rabin, oo doonaya in mustaqbalka jiilasha soo socda inay cunaan, waxa kale ee ay runtii ka helayaana aanan garanayn weeye. mashruucu uu soconaya, dowladu heshiis ayay gashay, barlamaanka ayaa ansixiyay” ayuu madaxweynuhu sii raaciyay
Dekeda magaaladda Bosaso ayaa muddo 8 maalmood ah xirnayd ka dib markii ay ganacsatadu ay ka soo horjeesteen isbedelka Nidaam iyo khidmadaha ee ay shirkada P&O port ku soo kordhisay dekeda Bosaso. Dekeda oo dib u howlgashay ayaa ganacsatada la siiyay muddo 10 maalmood oo ay badeecadaha ku dejiyeen, islamarkaana laga wada-hadlo cabashooyinka ganacsatada iyo khidmadaha la kordhiyay.
Mudadii Dekedu xirnayd waxaa kor u kacay qiimaha maciishada iyo badeecada, waxaa kaloo dhacay mudaharaad ballaaran oo ka dhacay magaaladda Bosaso, Mudaharaadkaasi waxaa ku dhintay hal qof, labo qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.